I-HMD Nokia Lets You Design a limited Edition Casing yeNokia 3310 | Izindaba zamagajethi
Imodeli entsha ye-HMD Nokia 3310 isizokwethulwa eSpain, ikakhulukazi i-terminal eyaphumelela kakhulu emcimbini weBarcelona Mobile World Congress, izotholakala kusuka ngoMeyi 15 futhi kuphela kwiMedia Markt ngentengo yama-euro angama-59. Kulesi senzakalo, ngaphezu kwalokhu kutholakala okukhethekile, kufanele kukhunjulwe ukuthi i-terminal yethulwe ngemibala ehlukahlukene futhi ezweni lethu izotholakala ngombala ompunga, obomvu nophuzi. Kepha okuhle kakhulu kulokhu ukuthi uma ufuna ungabamba iqhaza emncintiswaneni womhlaba wonke wokuklama uhlelo olulinganiselwe lwezindlu zakwaNokia 3310 futhi Uma uwina, ungathatha iNokia 3310 yakho uqobo ngomsebenzi wakho.
Ngalo mqondo, inkampani ye-HMD Global ishiya ezandleni zethu inketho yokuthola uhlelo olulinganiselwe lwezindlu zakwaNokia 3310. Kulabo abafuna ukubamba iqhaza kulula kakhulu. Kufanele silayishe ukwakheka kwethu ku-Instagram nge-hashtag # 3310art bese silandela @nokuthula_mkhize, okubandakanya yonke imininingwane yomncintiswano. I-HMD Global kanye Ngithanda uthuli, isitudiyo sokuklama saseBrithani, sizokwahlulela ubuqalo, ubuciko nobuhle bayo yonke imiklamo ethunyelwe, sinikeze abasunguli inkululeko yokuqedela imiklamo eyingqayizivele neyangempela.
Akungabazeki ukuthi lo mncintiswano ungahle uthakazelise labo abebehlele ukwenza ukuthengwa kwalolu cingo oluzothengiswa ezinsukwini ezimbalwa futhi bajabulele ifoni noma kunalokho icala elikhethekile elinomklamo walo. Imigomo nemibandela ingatholakala ngqo kufayela le- Iwebhusayithi esemthethweni yakwaNokia futhi kukhona isikhathi kuze kube uLwesithathu olandelayo, Meyi 10, 2017.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-HMD Nokia ikuvumela ukuthi udale ikhebula elilinganiselwe le-Nokia 3310
Izicelo eziyi-7 ohlale wazi ngazo lapho upake khona